I-Clip-In Intension Hair Hair Extensions For Hair Hair
ikaliwe 4.56 ngaphandle 5
ikaliwe 4.64 ngaphandle 5
I-Clip Ins ye-Hair Hair
Izandiso zeeNdleko zeNdalo zinikezela ngekhwalithi ye-premium I-Clip Ins yonke i-Sista efunekayo! Sineziseko zethu ezihlanganiswe neqhotyoshelweyo kwizandiso ukufanisa zonke izinto ezisuka kwi-3a yonke into eya kwi-4c. Sinezophulo zesikrini kulabo abaguqukayo kunye nabafazi abanemvume nabo!
Iincoko zeenwele ze-Ins unikezela ngokukodwa ukutshintshanisa. Unokuzibhinqa zitsalwe kwi-ponytail ephakamileyo, isiqingatha kwisigamu, kunye nxalenye ecaleni, kunye nokunye okuninzi.
I-Clip-ins inikezela ngokugqithiseleyo ukuchaneka. Izindlela onokuzenza kunye nendlela yokuziphatha ngayo iinwele zakho ziphela. I-Clip-ins zivumela ukuba iinwele zakho zivele zize zize zide kwaye zinyame ngaphandle kokuba zichithe iiyure kwiilon zeenwele.
Iqhotyoshelweyo ye-clip yobude obude ukusuka kwi-10 "ukuya ku-24" nangona sikwenza ngokwezifiso umyalelo wakho ku-30 ".
Izinyathelo zethu zeenwele zendalo ziya kudibanisa ngokungazinzi ngeenwele zakho! Ezi zigqibeleleyo kulabo bavele benza i-CHOP yabo ye-BIG okanye loo ma-divas abafuna nje ukongeza ubude kunye nobukhulu kwizinwele zabo. Ngesikrini sethu esingokwemvelo kwiisethi, unokufikelela kwiinjongo zakho zeenwele phantsi kwemizuzu ye-10!